'बम्बे बेगम्स' समीक्षा : बलिउडलाई एक महिला निर्देशकको पत्र- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १३, २०७७ रीना मोक्तान
'संसारका लाखौं महिलाले झैं मैले पनि यौन दुर्व्यवहारको सामना गरेकी छु । मेरो गुरु प्रद्यूमन जाम्वालले धेरैपटक मेरो यौन शोषण गरे । तर म चुप बसें । त्यतिबेला मैले त्यही जानेकी थिएँ । अब हामी महिलाहरु मिलेर एकसाथ यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ । र यौन दुर्व्यवारलाई 'नो' भन्नुपर्छ ।'
नेटफ्लिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर मार्च ८ मा रिलिज गरेको ६ भागको सिरिज 'बम्बे बेगम्स'को अन्त्यतिरको दृश्य हो यो । तर, कथा र विषयको हिसाबले सुरुवात ।
कथावाचन गर्ने माध्यममा वाचकको प्राय: ध्येय आफ्नो कुरा सावित गर्नु वा स्रोता/दर्शकलाई आफ्नो कथामा विश्वस्त बनाउने हुन्छ । त्यही एक लाइनको कुरा भन्नका लागि कथा र पटकथाको सम्पूर्ण संरचना तयार पारिएको हुन्छ । बम्बे बेगम्सको त्यो एक लाइन हो- 'यौन हिंसा र कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसाविरुद्ध जसले जतिखेर जहाँ जसरी बोले पनि हुन्छ, त्यसका लागि हरेक समय उपयुक्त समय हो । अहिले हिंसामा परेकाले अहिल्यै बोल, पहिले भोगेकाले पनि अब बोल । यस विषयमा मौन बस्नु भनेको पीडककै मनोबल बढाउनु हो ।'
यो कुरा भन्नका लागि निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तवले ५ जना महिलाको कथा बुनेकी छन् । यी भिन्न उमेर र सम्बन्धमा रहेका महिला छन् । यिनको उमेर र सोच फरक छ । समाजमा यिनको ओहदा र दर्जा फरक छ । तर, यी सबैले भोगेको र देखेको समाज भने एउटै छ । प्रगति पथमा लम्किन खोज्न यी महिलाले भोग्ने बाधाहरु एउटै किसिमका छन्, खालि बाधा खडा गर्ने पात्रको वर्ग फरक छ ।
माथि उल्लेख गरिएको संवाद रोयल बैंककी सिइओ रानीले बोलेकी हुन् । मुम्बई सहरको एक कमर्सियल बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भनेको हालको पुँजी र शक्ति संरचनामा उपल्लो स्तरमा पर्ने पद हो । यो धेरै अर्थमा शक्तिशाली पद हो । जति धेरै शक्तिशाली पद, त्यति धेरै आकर्षण । चुम्बकले फलाम तान्छ । तर यसले सधैं सिक्का मात्रै तान्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, तिखा काटी र किला पनि यसले तान्छ । कर्पोरेट दुनियाँमा शक्तिशाली पदले त्यस्तै चुम्बकीय शक्ति बोकेको हुन्छ । रानीको वरिपरिमात्रै किला र काँटी छैनन् उनले त्यस्ता किला ठोकिएको लामो बाटोमा यात्रा गरेर आएकी छन् । त्यसैले उनी भित्र जत्रोसुकै आँधी चले पनि बाहिर शान्त देखिन्छिन् ।
रानी बैंककी सिइओमात्र होइनन् । उनका अन्य परिचय र नाता पनि छन्- उनी साई र जुराभरकी कान्छी आमा हुन् । नौसादकी पत्नी पनि हुन् । अन्य सिइओलाई जस्तो बैंकमा सफल भएर मात्र उनको जीवन सफल हुँदैन । उनी पूर्णरुपमा सफल हुनलाई पत्नी र आमाका रुपमा पनि सफल हुनुपर्ने मान्यता समाजले बोकेको छ । यो सिरिजले यही मान्यतामाथि प्रश्न उठाउँछ । तर, अन्तिमतिर रानीलाई आमा र पत्नीका रुपमा सफल भएको देखाएर फेरि त्यही मान्यताको समर्थन पनि गर्छ । रानीको परपुरुषसँग सम्बन्ध छ, त्यो पनि कमर्सियल बैंकलाई नियमन गर्ने सरकारी बैंकको गभर्नरसँग । रानीको पतिले यसमा आपत्ति त जनाउँदैन तर रानीलाई आफ्नी पत्नीको रुपमा पनि भावनात्मक रुपमा स्वीकार गर्दैन । उसका सन्तानले पनि रानीलाई आमाका रुपमा स्वीकार गर्दैनन् । अन्त्यसम्ममा केके घटनाक्रमको विकास हुन्छ र त्यो तिरस्कार स्वीकार्यतामा बदलिन्छ भन्ने 'बम्बे बेगम्स'को एउटा कथा हो ।
पाँचजना पात्रका पाँच फरक कथा यसमा छन् । तर, ती सबैलाई आपसमा जोडिएको छ । केही पात्र छन् जसको कहिल्यै भेट हुँदैन तर भावनात्मक रुपमा तिनको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।
रानीकै बैंकमा काम गर्ने अर्की पात्र छ- फातिमा । फातिमा र उसको पति अरिजय सन्तान जन्माउने योजनामा छन् । सन्तान जन्माउने योजनाबीच नै फातिमाले नसोचेको पद पाउँछे । अब उसका अघिल्तिर सन्तान कि करिअर भन्ने प्रश्न आइपुग्छ, जो सामान्यत र मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका सबैजसो कामकाजी महिलाले भोग्ने गरेका छन् । यो प्रमोसन लिँदा उसको दर्जा त्यही बैंकमा काम गर्ने आफ्नो पतिभन्दा उच्च हुनेछ । यसले पतिको 'मेल इगो' जगाउने पक्का छ । यो असमञ्जसबाट सुरु हुने परिवारको तनाव कुन हदसम्म बढ्छ र यसको निकास के निस्किन्छ त्यो सिरिजको अर्को कथा हो ।
बैंकमा काम गर्ने अर्की पात्र छिन्- आइसा । ईन्दोरबाट मुम्बई आएर संघर्षरत आइसा रानीजस्तै एक दिन बैंकको सिइओ हुने सपना बुन्छिन् । एक्लै भएकै कारण घरबेटीले उनलाई कोठामा बस्न दिँदैन । उनी बास खोज्दै कहिले आफ्नो पूर्वप्रेमी त कहिले बैंककै सहकर्मीको घरमा भौंतारिन्छिन् । आइसाको यो विवशताको फाइदा ककसले उठाउन खोज्छन् र उनलाई कसरी हिंसाको सिकार बनाउँछन् त्यो अर्को कथा हो । साथमा आइसाको समस्या के छ भने यो पात्र आफ्नो यौनिकतालाई लिएर पनि संशयमा छ । सिरिजको अर्को कथा हो रानीकी सौतेनी छोरी साइको, जो किशोरावस्था र विपरीत लिंगीप्रतिको आकर्षणको पहिलो तरंगमा तैरिइरहेकी छन् ।
सिरिजको अर्को मुख्य कथा छ- लीलीको । लीलीको कथा महत्वपूर्ण किन पनि छ भने प्राय: सबै पात्रलाई जोड्ने काम लीलीले नै गर्छिन् । कुनैबेला डान्सबारका अँध्यारोमा काम गरेकी (देह व्यापारसमेत) लीली आफ्नो छोराका लागि उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा छन् ।
सिरिजका केही पात्र र घटना अर्कै समाजका जस्ता लाग्छन्, खासगरी कर्पोरेट दुनियाँको खुला र उदार यौन सम्बन्धका प्रसंगहरु । कतिपय प्रसंगहरु हाम्रै वरिपरिका जस्ता छन् । आफ्नो शरीरमाथिको नियन्त्रण र निर्णयहरुमा अधिकारका लागि महिलाहरुले संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । पितृसत्ताले गाँजेको समाजमा महिलालाई एक स्वतन्त्र अस्तित्व र व्यक्तिका रुपमा लिइएको पाइँदैन । महिलाहरुले यही मान्यताका विरुद्ध आन्दोलन गरिररहेका छन् । 'बम्बे बेगम्स'ले एक हदसम्म यो आन्दोलनको सान्दर्भिकता झन् प्रष्ट्याउँछ ।
यसका साथै दुर्व्यवहार र शोषणमा परेका महिलाले यौन दुर्व्यवहारकै कारण कति शारीरिक र मानसिक पीडा भोग्छन् भन्ने पनि देखाउँछ । यो कुरा आइसामार्फत् निर्देशकले देखाएकी छन् । एक दिन घर पुर्‌याइदिने क्रममा आइसालाई सिनियरले यौन शोषण गर्छ । जसकारण उर्जाशील आइसा कसरी विस्तारै ओइलाउँदै जान्छिन्, त्यो पनि सिरिजले देखाउँछ ।
आइसा दुर्व्यवहारबारे तत्कालै बोल्न सक्दिनन् । अधिकांश यौन दुर्व्यवहारबारे बोल्ने महिलाहरुमाथि उठ्ने प्रश्न नै यही हुन्छ- किन त्यही बेला बोलेनौ ? भर्खरै करियरको सुरुवात गरेकी एक महिलाले दुर्व्यवहारबारे बोल्दा आफ्नो काम नै गुमाउने अवस्था हुन्छ । यौन दुर्व्यवहारको पीडाले पनि कतिजना बोल्न सकिरहेका हुँदैनन् । र, शक्तिशालीहरुले बोल्नेलाई झन् दुख दिने, उजुरी नै दबाइदिने पनि गर्छन् भन्ने पनि सिरिजले देखाउँछ ।
दुर्व्यवहारबारे महिलाले आफ्नो प्रतिष्ठा, करियर नै दाउमा राखेर बोल्दासमेत उनीमाथि प्रश्नहरु उठाइन्छ । उनीहरुलाई गलत देखाइन्छ । आइसाले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे बोल्दा फातिमाले उल्टै विवाहेत्तर सम्बन्धको दृष्टिकोणले हेर्छिन् । रानी आफैं महिला भएर पनि उक्त विषयलाई भित्र-भित्रै मिलाउन खोज्छिन् । रानी र फातिमा 'मिटू' अभियान चर्किँदा पीडितहरुका आवाजलाई नसुदिने समाजकै पात्र हुन् । यौन दुर्व्यवहारबारे आवाज उठाउँदा धेरैले पीडितको आवाज बन्द गरिदिने प्रयास गर्छन् । केही समयअगाडि नेपालमा पनि अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मीले शाहले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको आवाज उठाउँदा धेरैले उनलाई 'चरित्रहीन' सावित गर्न खोजे । लामो समयपछि दुर्व्यवहारबारे बोल्दा उनको आवाजलाई कमजोर बनाउने प्रयास भए । समाजमा स्थापित व्यक्तिलाई त यो मुद्दा स्थापित गर्न यति गाह्रो छ भने संघर्षरतलाई कति गाह्रो होला ?
'बम्बे बेगम्स'ले यौन दुर्व्यवहारमा परेका महिलालाई बोल्न प्रेरित गर्छ । यसअघि 'लिपिस्टिक अन्डर माइ बुर्खा' बनाएर प्रशंसा कमाएकी अलंकृताले यसमा पनि उम्दा काम गरेकी छन् । यो सिरिजको अर्को विशेषता कलाकार र उनीहरुको अभिनय हो । यसमा खासगरि तीनजना कलाकारको अभिनय तारिफयोग्य छ । रानीको भूमिकामा पूजा भट्ट, फातिमाको भूमिकामा देखिएकी सहाना गोस्वामी र लीलीको भूमिकामा देखिएकी अम्रुता सुवास । यी तीन अभिनेत्रीले अन्य कलाकारसँग मिलेर यो सिरिजलाई महत्वपूर्ण बनाइदिएका छन् ।
सिरिजको अर्को विशेषता के हो भने यसले सावित गरेको छ एउटा राम्रो र प्रभावकारी फिल्म बनाउनका लागि ठूला स्टार चाहिँदैन । हिरोको भरमा फिल्म चल्छ भन्ने उद्योगमा अलंकृताले बताएकी छन्- महिलाका कथामा पुरुष सहायक हुँदा पनि कथाको स्वाद खराब हुँदैन । र, कमसेकम उनले आफूले सृजना गरेको फिल्मको संसारमा चाहिँ महिलालाई मूख्य भूमिकामा राखेकी छन् । यो पनि बलिउडजस्तो उद्योगका लागि एउटा शिक्षा हो, उनको सन्देश हो- फिल्मलाई मानिसका भोगाइका कथा र तिनलाई व्यक्त गर्ने कलाले सुन्दर बनाउँछ, न कि कुनै खान वा कपुर हिरोको उपस्थितिले । यसलाई एक महिला निर्देशकको बलिउडलाई पत्र पनि भन्न सकिन्छ, जसले समाजमा महिलाको अवस्थामात्र भन्दैन महिलालाई 'सो पिस' ठान्ने बलिउडलाई महिला पात्र कसरी निर्माण गर्नुपर्छ र तीनलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि एउटा सानो शिक्षा दिन्छ !
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ १९:५९
ह्याकर्सले अकाउन्टबाट पैसा असुल्दै
काठमाडौँ — अभिनेता सरोज खनाल र अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाको फेसबुक ह्याक भएको छ । ठगी गर्ने उद्देश्यले फेसबुक ह्याक गरेको पत्ता लागेपछि दुवै जनाले बिहीबार साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका छन् ।
तस्बिर : खनाल र निरौलाको फेसबुकबाट
आफ्नो अकाउन्टबाट ह्याकर्सले २५ हजार ठगीसकेको बताउँछन् सरोज खनाल । 'मेरो फेसबुक ह्याक भएको २४ घण्टा भयो । हुन त अहिले साइबर ब्यूरोले यसमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ,' उनले भने, 'हाम्रो अकाउन्टबाट ती ह्याकर्सले पैसा माग्ने काम गरेका छन् । मेरो दुईजना साथीले १० र १५ हजार रूपैयाँ पठाइसकेका रहेछन् । उनीहरुले मलाई अप्ठ्यारो परेको रहेछ भनेर पैसा हालिदिएछन् । मलाई ६० जना जतिले फोन गरेर पैसा चाहिएको भन्दै फोन गरिसक्नु भएको छ ।'
ह्याकर्सले आफ्नो फेसबुकको दुरूपयोग गरेर म्युचल फ्रेन्डलाई न्यूनतम ८० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म मागेको सरोज सुनाउँछन् । '२५ हजार फसिसकेको थाहा पाएपछि साथीहरुलाई फेसबुक ह्याक भएको जानकारी त दिएको छु,' सरोज भन्छन्, 'उनीहरुले कसैलाई के फन्ड खोल्ने भनेर पैसा मागेका छन् । कतिलाई मलाई अप्ठ्यारो पर्‍या छ भनेर पैसा मागेको छन् । बैंकको कार्ड पनि फरक-फरक बैंकको छ ।'
साइबर ब्यूरोले फलोअर्स धेरै भएकाले अकाउन्ट रिकभर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने दोधार भएको सुनाएपछि सरोज तनावमा छन् । 'त्यो फटाहाको हातमा पैसा नजाओस् भनेर मेरो कोसिस भइरहेको छ, 'उनले भने ।
सरोजका अनुसार पत्रकार दयाराम पाण्डेको अकाउन्टबाट उनलाई एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमको विषयबारे छलफल गर्न भन्दै जुम मिटिङमा निम्तो दिए । जुम मिटिङमा आइडी राख्ने बित्तिकै आफ्नो अकाउन्ट ह्याक भएको सरोज बताउँछन् । 'मेरो अकाउन्टबाट दीपालाई पनि मेसेज गएको रहेछ । ह्याकर्सले फेसबुकको दुरूपयोग गरेर ठगी गरिरहेको छ,' सरोजले भने ।
सरोजको अकाउन्टबाट मेसेन्जरमा आएको कोड नम्बर डायल गर्ने बित्तिकै आफ्नो अकाउन्ट ह्याक भएको बताउँछिन् दीपाश्री निरौला । 'सरोज दाइको फेसबुक ह्याक भइसकेको रहेछ । सरोज दाइले एउटा कोड पठाएको छु गफ गरौं न भनेर मेसेज गर्नु भयो । मैले गफ गर्न नम्बर डायल गर्ने बित्तिकै ह्याक भयो,' दीपा भन्छिन्,'त्यसपछि शंका लाग्यो मलाई । अनि मैले सुमन भान्जालाई भने । उसले मेरो अकाउन्टमा मेसेज गरेपछि ह्याकर्सले आपत परेको भन्दै एक लाख रूपैयाँ माग्यो । अनि हामी पक्का भयौं ।'
दीपा थप्छिन्,'मेरो अकाउन्टबाट को-कसको ह्याक हुने हो भनेर थाहा छैन ।' उनलाई पनि फेसबुकमा रहेको २ लाख बढी फलोअर्सकै चिन्ता छ । 'हामी डिजिटल प्लेटफर्ममा मख्ख हुन्छौं तर यो त्यति सुरक्षित हुँदो रहेनछ, 'उनले भनिन् ।
एक महिनायता अकाउन्ट ह्याक गर्ने ट्रेन्ड बढेको बताउँछन् साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता नविन्द अर्याल । 'सरोज र दीपाको मुद्दामा हामी सामाजिक सञ्जालको सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गर्दैछौं । पछिल्लो समयमा ह्याक गर्ने ट्रेन्ड एकदमै बढेको छ । विगत एक महिनादेखि ह्याक गर्ने र म्युचल फ्रेन्डलाई पैसा डिपोजिट गरिदिन भन्ने ट्रेन्ड एकदमै बढेको छ, 'उनी भन्छन्, 'हामी आफ्नो पक्षबाट सबैलाई सजकता अपनाउन सल्लाह पनि दिन चाहन्छौं । हामीले चलाउने सामाजिक सञ्जाल नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित छन् । यसको विश्लेषण र अनुसन्धानको विषयहरु सम्बन्धित कार्यालयसँग हुन्छ ।' उनका अनुसार सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिक्रियासँगै कार्यान्वयनको काम अगाडि बढ्नेछ । त्यसैले अनुसन्धान कहिले सकिन्छ भन्ने एकिन नभएको उनको भनाइ छ । 'कुनै मुद्दामा अपराधी ७ घण्टामै पत्ता लागेको छ । कुनैलाई १५ दिन पनि लागेको छ,'उनले भने ।
यो मुद्दामा वित्तिय कारोबार ऐन २०६३ को परिच्छेद ९ का दफाहरु आकर्षित हुने अर्याल बताउँछन् । परिच्छेद ९ मा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिइ सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसूर ठहरिने उल्लेख गरिएको छ । यो दफाविपरित जानेलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
अभिनेत्री दीपाश्री यस किसिमको अपराधीलाई सजाय कम भएको बताउँछिन् । ' ह्याकर्सहरु धेरै नै अराजक भए । यो एकदमै नै ठूलो समस्या हो । ह्याकर्सले एकजनाबाट एक लाख उठाइरहेको हुन्छ । उनीहरुलाई सजाय २ लाख जरिवाना त न्यायोचित भएन नि, 'उनले भनिन्, 'हाम्रो कानुन कडा हुनुपर्‍यो । यस्तो सजाय होस् कि दोस्रोपटक अपराधीले अपराध गर्ने नसोचोस् ।'
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ १४:४६